Sarkaal ka tirsanaa Laanta dambi baarista CID oo Muqdisho lagu dilay iyo Sarkaal Milateri oo la dhaawacay | Sagal Radio Services
Sarkaal ka tirsanaa Laanta dambi baarista CID oo Muqdisho lagu dilay iyo Sarkaal Milateri oo la dhaawacay
Kooxo hubeysan ayaa gelinkii dambe ee maanta ku dilay agagaarka Xaafada Korontada ee degmada Wadajir Sarkaal ka tirsanaa Ciidanka Booliska Soomaaliya, gaar ahaan Laanta dambi baarista ee CID.
Labo dhalinyaro oo bastoolado ku hubeysan ayaa Sarkaalkan oo lagu magacaabayay Col. Maxamed Cabdi madaxa ka toogtay, iyagoo ku baxsaday Mooto ay wateen, markii ay falka geysteen.
Sidoo kale dabley hubeysan oo xirnaa dharka Milateriga ayaa galabta ku dhaawacay Isgoyska Tarabuunka ee degmada Hodan Sarkaal ka tirsanaa Ciidamada Milateriga Soomaaliya oo lagu magacaabayay Col. Hufle oo la sheegay inuu ka tirsanaa Saraakiisha Milateriga ee Gobolka Gedo, kaasoo maalmahan ku sugnaa Muqdisho.
Wararka ayaa intaa ku daraya in dableydii falka dhaawaca geystay ay ku baxsadeen gaari ay wateen, waxaana markii dambe soo gaaray goobta ciidamo ka tirsan dowladda, kuwaasoo goobta ka qaaday dhaawaca sarkaalka.
Ma jirto ilaa iyo hada cid sheegatay weerarkan, iyadoo maalmihii u dambeeyay magaalada Muqdisho ay ka jireen weeraro ay geysanayeen dabley hubeysan oo gaadiid watay, kaasoo lagu dilay saraakiil ka tirsan dowladda.